बहुचर्चित फिल्म केजीएफ २ को वास्तविक कहानी : जान्नुहोस् त्यो सुनखानी कहाँ छ ? – Annapurna Post News
April 13, 2022 sujaLeaveaComment on बहुचर्चित फिल्म केजीएफ २ को वास्तविक कहानी : जान्नुहोस् त्यो सुनखानी कहाँ छ ?
जुही मिश्रा । केजीएफ च्याप्टर २ को ट्रेलरले केजीएफले जस्तै चर्चा सिर्जना गरेको छ।फ्यानहरू उत्सुकतापूर्वक यसको प्रतिक्षा गरिरहेका छन् ताकि उनीहरूले थाहा पाउन सकुन् कि त्यो पुरानो सुन खानीको वास्तविक मालिकको बन्छ।
चलचित्र वा कथाका पात्रहरू जस्तै सुनको खानी काल्पनिक हो भनी सोच्दै हुनुहुन्छ भने पर्खनुहोस् । यो खानी वास्तविक हो।अचम्मको कुरा के छ भने १२१ वर्षसम्म यहाँबाट सुन निस्क्यो र बाहिर निस्किरह्यो ।
केजीएफ खानी बेलायती युगको आविष्कार हो-केजीएफ अर्थात् कोलार गोल्ड फिल्ड्स कर्नाटकको दक्षिणपूर्वी क्षेत्रमा अवस्थित छ र बैंगलोर–चेन्नई एक्सप्रेस वेमा केजीएफ टाउनशिपबाट १०० किलोमिटर टाढा छ। यो ठाउँ धेरै तरिकामा विशेष छ।
सन् १८७१ मा, जब भारत अंग्रेजहरूको दास थियो । ब्रिटिश सैनिक माइकल फिट्जगेराल्ड लेभालीले बैंगलोरमा आफ्नो घर बनाए। उनले आफ्नो धेरैजसो समय किताब र लेखहरूमा बिताए। उनलाई भारतको इतिहासमा पनि निकै चासो थियो ।
यस्तै एक दिन १८०४ मा प्रकाशित एशियाटिक जर्नल मा एक लेख देखियो। जसमा भनिएको थियो कि कोलारमा यति धेरै सुन छ कि मानिसहरूले हातले जमिन खनेर निकाल्छन्।सन् १७९९ मा श्रीरंगपटनाको युद्धमा टिपु सुल्तानलाई मारेर अंग्रेजहरूले कोलार र वरपरको क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका थिए। पछि यो भूमि मैसूर राज्यलाई दिइयो, तर शासकहरूले कोलारलाई आफ्नो हिस्सामा राखे। उनीहरूलाई थाहा थियो कि यहाँ सुन छ। अलास, चोल साम्राज्यमा मानिसहरूले हातले जमिन खनेर सुन निकाल्ने गर्दथे भन्ने इतिहास राखिएको थियो ।
बेलायती सरकारका लेफ्टिनेन्ट जोन वारेनले त्यहाँ सुनको ठेगाना दिनेलाई पुरस्कृत गर्ने घोषणा समेत गरेका थिए । त्यसपछि कोलार गाउँबाट बैलगाडीमा चढेर केही गाउँले वारेन पुगेका थिए । जब उनले वारेनको अगाडि आफ्नो बैलगाडीको पाङ्ग्रा सफा गरे, त्यहाँको माटोबाट सुनको निशान निस्कियो।
लामो अनुसन्धानपछि कोलारवासीले हातले सुनको उत्खनन गर्ने तरिकाले यसबाट ५६ किलो सुन निकाल्न सकिने बुझिएको थियो । यसपछि सन् १८०४ देखि १८६० को बीचमा अंग्रेजहरूले जमिनबाट सुन निकाल्ने प्रयास गरे । गाउँलेहरू यो काममा लागे, धेरैले ज्यान समेत गुमाएका थिए तर खास केही प्राप्त भएन ।
सन् १८७३ मा, लेवेलीले कोलारमा उत्खनन गर्न मैसूरका महाराजाबाट अनुमति लिए र काम सुरु गरे । लेवेलीले २० वर्ष उत्खनन गर्न अनुमति पाएका थिए, जसमध्ये सुरुका दुई वर्ष मजदुर सङ्कलन गर्न मात्रै समय वितेको थियो । १८७५ मा यो क्षेत्रमा सुन खन्ने काम सुरु भयो ।त्यही समय त्यहाँबाट सुन निस्किन थाल्यो । सुन लिएर आउने मजदुरहरू पनि यति वर्षसम्म सुनको भण्डारमा बस्दै आएकाले खबर समेत नपाउँदा छक्क परेका थिए ।
केजीएफ खानीहरूमा दिनको २४ घण्टा काम हुन थाल्यो । महिला, पुरुष, बालबालिका सबै खानीमा काम गर्थे। त्यहीँ बस्ने, त्यहीँ सुत्ने र सुन खनेर निकाल्ने दैनिकी चल्न थाल्यो । खानीमा रहेको अन्धकार हटाउन सानो दियालोहरु बाल्ने गरिन्थ्यो ।
तर केही समयपछि नै यहाँबाट सुन निकाल्न अंग्रेजहरूले बिजुली प्रयोग गर्न थाले । केजीएफ भारतको पहिलो क्षेत्र हो जहाँ पहिलो पटक बिजुली बलेको थियो । निर्दोष गाउँलेहरू बिजुलीको बल्ब देखेर सुनले आफ्नो भाग्य उज्यालो बनाएको भनी सोचिरहेका थिए तर यसले अंग्रेजहरूको खल्ती मात्र भरिरह्यो। गाउँलेलाई हैन अंग्रेजलाई लाभ भयो ।
त्यहाँबाट १३० किलोमिटर टाढा रहेको कोलार गोल्ड फिल्डको बिजुलीको आवश्यकता पूरा गर्न कावेरी पावर स्टेशन निर्माण गरिएको थियो। यो जापानपछि एशियामा दोस्रो ठूलो विद्युतीय पावर हाउस हो । जुन अहिले पनि कर्नाटकको मण्ड्या जिल्लाको शिवनसमुद्रमा अवस्थित छ।
बिजुली आएपछि मेसिनबाट धेरै काम सुरु भयो । जसका कारण खानीको कामले गति लियो । १९०२ सम्ममा केजीएफले भारतको ९५ प्रतिशत सुन निकाल्न थाल्यो । र सन् १९०५ सम्म, भारत सुन खानीको मामलामा विश्वमा छैटौं स्थानमा पुग्यो।
केजीएफ फेरि राष्ट्रियकरण भयो
केजीएफ सुनको खानी मात्र थिएन, यो बेलायतीहरूका लागि पर्यटकीय क्षेत्र पनि बन्यो। यहाँको मौसम चिसो थियो, त्यसैले केजीएफलाई भारतको इङ्गल्याण्डको रूपमा प्रस्तुत गरियो र धेरै ब्रिटिश परिवारहरू यहाँ आएर बस्न थाले । कुनै समय खानीमा ३० हजार मजदुर काम गर्दथे, तर बिस्तारै छिमेकी प्रदेशबाट कामदार आएर उनीहरुको संख्या लाखौं पुग्यो ।
खानी नजिकै घर बनाएर मजदुरका परिवार बस्न थाले र कोलार मान्छेले भरियो । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भयो। अंग्रेजहरूले देश छोडे। आफूले सकेसम्म सुन लिएर गए। त्यसपछि केजीएफको राष्ट्रियकरणको कुरा उठ्यो । सरकार गठन भयो र यो खानी सन् १९५६ मा राष्ट्रियकरण भयो ।
सन् १९७० मा भारत सरकारको भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड कम्पनीको नाममा खानी पुनर्जीवित गरिएको थियो । तर, कामदारको हकमा केही परिवर्तन भएन । उनीहरु पहिले ब्रिटिशका लागि काम गर्दै थिए र त्यसपछि भारत सरकारको लागि काम गर्न थाले। तर, भारत सरकारले पनि खानीमा खास केही गर्न सकेन । अंग्रेजहरूले धेरैजसो सुन आफ्नो साथमा लगिसकेका थिए।
सन् १९७९ सम्म कम्पनीले कामदारलाई तलब पनि दिन नसकेको अवस्था आयो । कामदार र कर्मचारीलाई जागिरबाट हटाइयो । बिजुलीको बिल तिर्न नसकेर कम्पनी घाटामा गयो । जसका कारण खानीमा काम रोकिएको छ । केही वर्ष यसरी नै बित्यो र सन् २००१ मा भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड कम्पनीले उत्खनन रोक्यो ।
अहिले यहाँ भग्नावशेष मात्र बाँकी छ । केजीएफमा १२१ वर्षसम्म सुन उत्खनन गरिएको थियो र सरकारी हिसाबले यहाँबाट करिब ९०० टन सुन निस्किएको देखाउँछ। सायद यो हामीले सोचेको भन्दा धेरै छ । तर, २०१६ मा फेरि केजीएफलाई रिभाइभ गर्ने लिलामी प्रक्रियाको चर्चा भए पनि अहिलेसम्म चर्चा मात्र भएको छ । यहाँ धेरै सुन हुन सक्ने सरकारको विश्वास अहिलेपनि छ ।
केजीएफ को कथामा श्रम कारक बिल्कुल सही छ। उनी अंग्रेज र त्यसपछि स्वतन्त्र भारतमा निर्माण भएका खानी ठेकेदारहरूको दास बने । सुन खन्ने गर्थे तर अन्धकारमा जीवन बिताउँथे ।सुनको खोजीमा निस्किएका कोलारको भग्नावशेष खानीमा कैयौं मजदुरको शव गाडिएको छ, जो कहिल्यै फर्किन सक्दैनन् । यसलाई यति वास्तविक कथामा फिल्म उतारिएको छ की पहिलो संस्करणले दुनियाँको मन छोएको छ । अहिले यो दोस्रो संस्करण हो । जुन प्रर्दशनमा नआउँदै खुबै चर्चामा छ ।
चलचित्रकर्मीलाई झरना थापाको गुनासो ‘हामीलाई झम्टिने चितुवाले तपाईंलाई बाँकी राख्छ त ?’
बिहेको फोटो सार्वजनिक गर्दै केकीले आफ्ना शुभचिन्तकको लागि लेखिन यस्तो मार्मिक शब्द